उपनिर्वाचनमा धमाका मच्चाउने दाउँमा साझाकी यी उम्मेदवार को होलिन् त ?
पोखरा । मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनमा कसले बाजी मार्ने हो भन्ने अहिलेदेखि नै चर्चाको विषय बन्न थालेको छ । कास्की क्षेत्र नम्बर २ देशकै एकमात्र प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचन हुने क्षेत्र हो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि कास्की क्षेत्र नम्बर २ रिक्त छ ।
तत्कालीन एमालेले जितेको ठाउँमा यो पटक कसले टिकट पाउँछ भन्ने अझैं टुंगो लाग्न सकेको छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले टिकट पाउलान् की भन्ने पनि चर्चा चलेको छ ।
गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी नबने पनि निक्कै चर्चा बटुलेको थियो । पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकामा भाग लिँदा रञ्जु दर्शनाले उधुम मच्चाएकी थिइन् । संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीका रवीन्द्र मिश्रले पनि उत्तिकै चर्चा कमाएका थिए ।
अहिले फेरि मिश्र नै उठ्ने होकी भन्ने चर्चा परिचर्चा छ । तर शनिबारको झलक हेर्दा उनको ठाउँमा रजनी केसी उम्मेदवार बन्ने संकेत देखिएको छ । केसी शनिबार मात्र नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी साझा प्रवेश गरेकी हुन् ।
‘कास्कीमा म उठ्नेबारे चर्चा चल्यो । सामाजिक सञ्जालमा पनि फैलियो,’ कास्कीकै व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने भन्दै मिश्रले भने, ‘आज मात्र पार्टी प्रवेश गर्ने र संयोजक घोषणा हुने साथीहरु नै यति शसक्त र ऊर्जाशील हुनुहुन्छ ।’ यो भनाईले पनि केसी उम्मेदवार बन्ने निश्चितझै छ ।
रजनी लामो समय नेपाल विद्यार्थी संघमा क्रियाशील बनिन् । त्यसपछि महिला संघ हुँदै कांग्रेसको राजनीतिमा आएकी उनी प्रखर वक्ता पनि हुन् । उनलाई कास्की २ को उपनिर्वाचनमा टिकट दिने गरी उनलाई पार्टी प्रवेश गराइएको साझा पार्टीका एक नेताले बताए ।
उनले चुनाव लड्ने योजनाका साथ पोखरा विश्वविद्यालयमा उपप्रशासक पदबाट हालै राजीनामा समेत दिएकी छन् । २० वर्ष पोखरा विद्यालयमा सेवा गरेकी रजनीको राजीनामा कात्तिक १ गतेबाट लागु हुने गरी स्वीकृत भइसकेको छ । ‘म समाज सेवामा अझै कसरी लाग्न सकिन्छ भनेर खोजिरहेकी थिएँ । त्यसैले पनि पोखरा विश्वविद्यालयबाट राजीनामा दिएकी हुँ,’ उनले भनिन् ।
‘नेपाली पत्रकारिताको विकासमा प्रवासी पत्रकारहरुको योगदान उच्च’
काठमाडौं । प्रवासमा रहेर पनि नेपाली पत्रकारिताको विकासमा प्रवासी पत्रकारहरुको योगदान उच्च रहेको प...
६४ वर्ष लागेको दिन अस्पतालबाट सेवामुक्त भए डा. गोविन्द केसी
काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै पटकपटक डा. केसी आफ्नो उमेर हदका कारण आजै सरकारी स...
एनआरएनएका उपाध्यक्ष कुल आचार्यले गरे उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचनमा वर्तमान उपाध्यक्ष कुल आचार्यले प्यानलसहित...
विमान डिले हुँदा राजपाका सांसदले गरे कार्यालय तोडफोड र हातपात
जनकपुरधाम । केही समयअघि १५ मिनेट विमान डिले हुँदा आफुलाई भ्रष्टाचार अभियान्ता बताउने ज्ञानेन्द्र ...
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन नगरिए पुनः सत्याग्रह थाल्ने डा.केसीको चेतावनी
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले आफूसँगको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन नगरिए कार्तिक १३...
काठमाडौं । नयाँ सभामुखका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुबीच दौड तिव्र भएको छ । निवर्तमान स...